China Sichuan Congou Nhema tii fekitori uye vagadziri | Yibin Tea
SICHUAN CONGOU KABHUI Tea
Dunhu reSichuan ndeimwe yenzvimbo dzekuzvarwa dzemiti yeti muChina. Nemamiriro ekunze akapfava uye kunaya kukuru kwemvura, inokodzera kwazvo kukura kwetii. Iko kutaridzika kweSichuan congou nhema tii yakasimba uye ine nyama, ine goridhe pekoe, inonhuhwirira isingagumi ine kunhuwirira kweorenji. Musika mukuru unosanganisira United States, Ukraine, Poland, Russia, Turkey, Iran, Afghanistan, Britain, Iraq, Jordan, Pakistan, Dubai nedzimwe nyika dzeMiddle East.
Yakareba uye yakatetepa ine matipi egoridhe, Ruvara rwakasviba uye nemafuta, muto mutsvuku
Nyowani uye inotapira hwema
"Sichuan Gongfu Nhema Tea", "Qihong" uye "Dianhong" zvinozivikanwa pamwechete sevatatu vatema vatema muChina, uye vanga vachizivikanwa kuChina nekune dzimwe nyika.
Sichuan Nhema Tea
Kare ma1950, "Chuanhong Gongfu" (anowanzozivikanwa seSichuan dema tii) akanakidzwa nemukurumbira we "Saiqihong" payakangotangwa pamusika wepasi rese. Yakakundawo mibairo mizhinji yepasi rose, uye hunhu hwayo hwakarumbidzwa pasi rese uye mudzimba.
Sichuan nhema tii inotanga kugadzirwa muYibin, uye VaLu Yunfu, nyanzvi inozivikanwa yetii muChina, vakarumbidza "Yibin iguta rekuSichuan nhema tii".
(1) Shandisa gomo remvura yemvura, tsime mvura, yakanatswa mvura uye imwe yakaderera-calcium-magnesium "mvura nyoro" pakubika kuona kuti mvura iri nyoro, isina ruvara, isina kunaka, uye yakakwira oxygen; yemhando yepamusoro Sichuan Gongfu nhema tii inonyanya kubikwa isina mvura yemupombi.
(2) Sichuan Gongfu tii nhema haigone kubikwa nemvura irikufashaira ichipisa inopisa kusvika pa100 degrees Celsius. Kunyanya iyo yepamusoro-kumagumo Sichuan Gongfu nhema tii yakagadzirwa kubva kumashizha emuti wetii, iwe unofanirwa kumirira iyo inovira mvura kuti itonhorere kusvika 80-90 degrees Celsius usati wabikwa.
(3) Isa 3-5 magiramu eiyo yakaoma mukombe. Yekutanga furo ndeyekugeza iyo tii, nekukurumidza kunze kwemvura kugeza kapu nekunhuwidza kunhuhwirira, kureba kwekutanga kusvika kune chegumi kufema kuri nezve: 15 masekondi, 25 masekondi, 35 masekondi, 45 masekondi. Iyo yekubuda mvura nguva inogona kudzorwa zvinoenderana neyako sarudzo.
(4) Shandisa chai chaiyo seti. Kunze kwekunwa Sichuan Gongfu nhema tii, iwe unofanirwa kukoshesa kudonha uye kutambanudza kwemashizha tii mumvura, saka zvakanakisa kushandisa yakasarudzika girazi mukombe wakaisirwa tii tii kubika.
(5) Dururira chinenge chegumi chemvura inopisa mumukombe kuti scald mukombe, uye woisa 3-5 magiramu eti, uye wozodira mvura pamadziro egirazi yekubikira. Mashizha eti achapararira mumukombe. Yakasiyana hupfumi hwema.
Zvakanakira kunwa Sichuan Congou nhema tii
1 、Wisa muviri uye ramba kutonhora
Mukombe wetii inodziya nhema haugone chete kudziisa muviri wako, asi zvakare unoita chinzvimbo mukudzivirira chirwere. Nhema tii yakafuma mumapuroteni neshuga, inopisa uye inodziisa dumbu, uye inogona kusimudzira kugona kwemuviri kurwisa kutonhora. Mune dzimwe nzvimbo dzenyika yedu, kune tsika yekuwedzera shuga kune tii tii uye kunwa mukaka, izvo zvisingagone chete kupisa mudumbu, asi zvakare kuwedzera chikafu nekusimbisa muviri.
Iyo polyphenols yetii iri muiyi ine chinhu chinokatyamadza uye chine kumwe kurira padumbu. Izvo zvinonyanya kutsamwisa pasi pemamiriro ekutsanya, saka dzimwe nguva kunwa tii pane isina chinhu mudumbu kunokonzeresa kusagadzikana.
Nepo tii nhema ichigadzirwa kuburikidza nekuvira uye kubheka, tii polyphenols inoiswa enzymatic oxidation pasi pechiito chei oxidase, uye zvirimo zveiyi polyphenols zvaderedzwa, uye kutsamwa kune mudumbu kwakaderedzwawo.
Izvo zvinogadzirwa zveiyo oxidation yetii polyphenols mune nhema tii inogona kukurudzira kugaya nemuviri wemunhu. Kugara uchinwa tii nhema neshuga nemukaka kunogona kudzikisa kuzvimba, kuchengetedza gastric mucosa, uye kuve nezvimwe zvakanaka zvekuchengetedza dumbu.
Batsira kugaya uye kubvisa girizi
Nhema tii inogona kubvisa kuchena, kubatsira kugaya kwemudumbu, kukurudzira kudya, uye kusimbisa moyo basa. Kana iwe uchinzwa kuguta uye kuzvimba mukudya kwako kwezuva nezuva, inwa yakawanda tii tii kuti uderedze kukora uye kukurudzira kugaya. Hove hombe nenyama zvinowanzoita kuti vanhu vazeye. Kunwa tii nhema panguva ino kunogona kubvisa kuchena, kubatsira kugaya mudumbu uye ura, uye kubatsira hutano hwako.
Kurwisa kwemuviri kwadzikira uye zviri nyore kubata dzihwa, uye tii tema inogona kudzivirira dzihwa. Nhema tii ine yakasimba antibacterial simba. Gargle ine nhema tii inogona kusefa mavhairasi kudzivirira kutonhora, kudzivirira kuora kwemeno uye chepfu yechikafu, uye kudzikisira shuga yeropa uye neBP.
Dema tii inotapira uye inodziya, yakafuma mumapuroteni neshuga, izvo zvinogona kusimudzira kuramba kwemuviri. Nekuti iyo nhema tii yakanyatso kuviriswa, ine isina simba kutsamwa, uye inonyanya kukodzera kune vanhu vasina kusimba mudumbu nemuviri.
Iwo flavonoids uye tii polyphenols iri mutema tii zvakasikwa antioxidant zvinoriumba, izvo zvinogona kuvandudza muviri antioxidant kugona uye kubvisa mahara radicals mumuviri. Izvi ndizvo zvikonzero zvakakosha zvekukwegura kwevanhu, uye kuita kweiyo oxidation kunodzora rusununguko. Mushure mekunge hwaro hwanyangarika, zviratidzo zvekukwegura kwevanhu hazvizoonekwe.
Kunwa yakawanda tii tii panguva dzakajairika kunogona zvakare kuvandudza kugona kwekupokana nekuneta kwemuviri, nekuti caffeine iri mutema tii inogona kufadza moyo nemidziyo yeropa, kumhanyisa kutenderera kweropa, uye zvakare kukurudzira metabolism ye lactic acid mumuviri, iyo shanduka inokonzeresa muviri Hupenyu hwakakosha hwekuneta, mushure mekunge huwandu hwayo hwadzikiswa, muviri wemunhu hauchazonzwa kuneta, uye unonzwa zvakanyanya simba.
Pashure: CTC 2 # Nhema tii
Zvadaro: Yakaputswa Nhema tii